Nadiifinta tamarta korontada ayaa kor u qaadeysa shaqooyinka shaqo ee gobollada Dhexe
Shaqooyinka tamarta nadiifinta si dhakhso ah ayey u korayaan
Waxaan muddo dheer ogeyn in waxtarka kor u kaca iyo ilaha tamarta la cusbooneysiin karo ay keenayaan hawo nadiif ah iyo biyo, caruur caafimaad qaba, iyo jawi deggan oo deggan. Warbixin cusub ayaa muujinaysa in tamarta nadiifku ay sidoo kale kor u qaadi karto dhaqaalaha gobolka iyada oo abuuraysa shaqooyin cusub iyo warshado dhammeystiran oo cusub. Dhab ahaan, tamar nadiif ah ayaa gacan ka geysta shaqooyinka ka jira gees kasta oo ka mid ah gobollada Dhexe, iyo shirkadaha ka jira qaybtan ayaa qorshaynaya korriin qaran, sida laga soo xigtay Nadiifinta Shaqooyinka Midwest warbixinta Nadiifinta tamarta. Minnesota waxaa loogu talagalay inay noqoto hoggaamiye kobcinta shaqada tamarta nadiifka ah, oo ay taageerto siyaasado dowladeed oo xoog leh iyo warshado ku habboon. Warbixintani waa qalab muhiim ah oo lagu ogaanayo sida isbedelka tamarta ay u xoojin karto beelaha Dhexe iyo kor u qaadida dhaqaalaha.
Warbixinta Aasaasiga ah ee Shaqaalaha Midwest ayaa muujinaya in u gudubka dhaqaalaha tamarta nadiifka ah uu si wanaagsan u socdo gobollada Dhexe. Marka ugu horreysa waxa noqon doona sahamin sanadle ah, warbixinta ayaa lagu ogaaday in ka badan nus milyan shaqaale ah ayaa shaqeeya tamarta nadiifka ah ee ka jirta gobolka. Shaqooyinkaasi waxaa la filayaa in ay koraan 4.4% sanadkan, qiimaha ka sareeya heerka celceliska shaqada ee celceliska qaranka ee 0.5% sannadkii. Heerkan, hawlaha nadiifka ah ee nadiifka ah waxay ka mid noqon doonaan ganacsiyada ugu koraya ee Maraykanka.
Iyada oo taageero ka heleysa Xarunta McKnight Foundation, Joyce Foundation, E2, iyo Hay'adda Energy Energy, Nadiifinta Energy Energy waxay kaashatay BW Baaritaankii falanqaynta, kaas oo isticmaalay xogta Istaandarada Istaandarada Shaqaalaha Mareykanka oo lagu soo bandhigay sahaminta ganacsiyada Minnesota iyo gobolka. Tirakoobyada Nadiifinta Shaqada Dhexe ee Midwest ayaa sidoo kale qayb ka ah mid weyn Waaxda Waxbarashada ee Mareykanka ayaa daraasad ku samaysay dhammaan shaqooyinka tamarta ee Maraykanka.
Inta badan shaqooyinka tamarta nadiifka ah ee ka jira gobollada Dhexe, in ka badan 400,000, waxay ku jiraan waxtarka tamarta. Shaqooyinka ku lug leh abuurista tamarta laga helo ilaha dib loo cusbooneysiin karo sida dabaysha, qorraxda, tamar-dhuleedka, iyo tamarta hooseeya, iyo shaqooyinka gaadiidka horumarsan waxay ka dhigayaan tirada labaad iyo saddexaad ee ugu badan ee tamarta nadiifka ah, siday u kala horreeyaan.
At CleanJobsMidwest.com, waad baari kartaa dhammaan qaybaha, dib u eegida xogta ka mid ah 12ka gobol oo si faahfaahsan, xitaa sahaminta khariidadaha shaqada ee interactive, taas oo muujinaysa shaqooyinka tamarta nadiifka ah ee gobalka, sharci dejinta, iyo goobaha tirakoobka caasimadda.
Natiijooyinka laga bixiyo Minnesota
Minnesota, waxaan ogaanay sannado badan in aan kareyno dhaqaalaheena sii kordhaya ee ka soo jeeda qashinka kor u kaca badan. Tan iyo 1997, annaga Waxyaabaha Gawaarida ee Gobolka wuxuu koray 88% halka Kaarbuurta qiiqa ayaa soo baxay. Minnesota waxay leedahay Taageero Isbaheysiga ah oo ah Taageerada tamarta nadiifka ah iyo Taabashada tamarta, inta badan gaar ahaan Xeerka Awood-soo-saarka Generalka ee 2007, kaas oo abuuray heerka ugu sareeyaa ee Istaandarka Warshadaha Cusub ee Cusboonaysiinta iyo Isticmaalida Tamarta. Sababtoo ah siyaasadahan adag, 21% ee korontada Minnesota hadda waxay ka timaadaa dib u cusbooneysiin, ilaa 6% oo keliya 2000.
Warbixinta Nadaafadda Shaqada ee Midwest ayaa muujinaysa in Minnesota ay ka badan tahay 54,000 shaqooyin tamar nadiif ah oo ku baahsan gobolka. Sida gobolka, kobaca xooggan ayaa lagu qiyaasey warshadaha tamarta nadiifka ah ee Minnesota - 4.4% sanadka soo socda. Inta badan shaqooyinka tamarta nadiifka ah ee Minnesota waxay ku jirtaa tayada tamarta (47,000 shaqooyin) iyo tamarta dib loo cusboonaysiin karo (5,000) shaqooyin.
Sidee qaybta tamarta nadiifka ah ee Minnesota u barbar dhigtaa warshadaha kale? Shaqooyinka tamarta nadiifka ah ee nadiifka ah ayaa lagu tiriyaa Minnesota marka la eego qaybaha sida miino-saarista iyo kaydka ama hantida maguurtada ah, sida uu qabo Waaxda Shaqada iyo Horumarinta Dhaqaalaha Minnesota (DEED) Tirakoobyada Shaqada Hadda. Waxaa jira shaqooyin kala duwan oo kala duwan oo ka mid ah shaqooyinka tamarta nadiifka ah sida qiimeynta DEED qiyaasta warshadaha dhismaha ee Minnesota. Inkastoo habka labadan qiyaasoodba ay u kala duwanyihiin, waxay faa'iido u tahay in la barbardhigo miisaanka warshadaha tamarta nadiifka ah ee warshadaha kale ee "dhaqameedyada" Minnesota.
Siyaasadaha moobilku waxay abuuraan shaqo abuuris
Dhaqaalaha tamarta nadiifka ah ee aan nadiif ahayn ma dhici doono iyada oo loo marayo suuqa kaliya. Siyaasadaha xorta ah ee kuyaala Dhexe ee Midwest ayaa gacan ka gaystay abuuritaanka abuurista warshado iyo shaqooyin cusub. Siyaasaduhu waxay bixiyaan calaamad ganacsi ganacsi. Si loo sii wado kobcinta dhaqaalaha tamarta nadiifka ah ee ka jira gobollada Dhexe, siyaasiyiinta dawlad-goboleedku waa inay bixiyaan hubin xeer-ilaalin, maalgelin, iyo ujeedooyinka siyaasadeed ee dawladda, sida hoos u dhigista hawada wasakhaysan. Iyadoo hubaal ahaan, waaxda tamarta nadiifka ah ayaa loo qorsheeyay inay abuurto tobanaan kun oo shaqo oo cusub sannad kasta.
Marka laga jawaabo baaritaanka Nidaamka Cusub ee Dhex-dhexaadinta Midwest, ganacsiyadu waxay caddeeyeen siyaasadaha sida Istaandarada Bandhigyada Casriyaysan (RPS), Istaandarada Hagaajinta Waxtarka Tamarta (EERS), Tamarta Federaalka ee Dib-u-cusboonaysiinta Maalgashiga Canshuuraha (ITC), iyo Qorshaha Awood-naadinta Nadiifinta ee Hay'adda Ilaalinta Deegaanka (CPP ) sida siyaasadaha leh ama ay kordhin karaan fursadaha ganacsiga. Sida laga soo xigtay warbixinta, afartan dawladood ee leh awoodda tamarta nadiifka ah ee ugu weyn waxay leeyihiin labada RPS iyo EER; Mid ka mid ah saddexda dowladood ee leh awoodda tamarta nadiifka ah ee gobalka ayaa leh mid ka mid ah siyaasadahan.
Machadka McKnight wuxuu ku faraxsanaa inuu taageero Taageerada Nadiifinta Tamarta si uu u soo saaro Nadiifinta Shaqooyinka Midwest warbixinta. Natiijooyinka cilmi-baaristu waxay xoojinaysaa aaminaadkayaga in u gudubka dhaqaalaha tamarta nadiifka ah uu abuuri karo shaqooyin wanaagsan oo xoojiya bulshooyinka ku jira Dhulka Dhexe.